Ntuziaka 13 dị mfe ma dị irè iji kpochapụ isi ísì ọjọọ site na ime ụlọ ịwụ - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Ọtụtụ mgbe ventily na-adịghị mma, ụlọ ịsa ahụ nwere ike isi ike ịnọgide na-enwe. Mana ọrụ a ekwesịghị ịdị na-agwụ ike ma ọ bụrụ na ịmara aghụghọ dị mma. Dị mfe ma dị irè, ha ga-eme ka ndụ gị kwa ụbọchị dị mfe maka ime ụlọ na-esi ísì ụtọ mgbe niile. Ka anyị nyochaa ha:
1. Ihe eji eme vanilla ka isisi iji saa isi n’uwa
Ọ dịghị mkpa iwepụta ọtụtụ kemịkal iji chọta isi na-atọ ụtọ na ime ụlọ ịwụ ahụ. Ọ ga-ekwe omume ịkwadebe ikuku freshener gị. Maka nke a, ị ga-achọ obere mmiri ole na ole wepụ vanilla na obere mmiri ị ga-etinye na karama. Raygba ngwakọta mgbe ị gachara mposi. Nkwa kwere ekwe!
2. White mmanya na-emeghe ụlọ mposi
Odosì ọjọọ na-esitekarị n’ụlọ mposi gbochiri. Maka nke a, ọ nwere ike ịba uru iji hụ na ị na-echekwa ha oge niile. N'ụzọ dị mma, nke a chọrọ nanị otu ihe dị mfe: mmanya na-acha ọcha. Daashi: ọ na-enye ohere agha megide tartar chịkọbara na ọkpọkọ. O zuru ezu ikpo ½ liter ọcha mmanya diluted ke 1 liter mmiri. Mgbe ahụ wụsa mmiri mmiri n’ime nnukwu efere ma hapụ ịme ihe maka nkeji iri abụọ tupu ị na-agbapụ.
Otu ọkpọkọ nke ezé ezé n'ime tank - Isi mmalite: Kidspot
3. Mint ntacha eze na mmiri
Nke a bụ ego ga-erite uru site n’ịbụ onye a maara nke ọma n’ihi na ọ na-enye ezigbo ụlọ ịsa ahụ gị ihe dị ọhụrụ. Iji nweta uru ya, mee ka akụkụ abụọ n'akụkụ gị n’akụkụ tọọpụ ezé gị, tinye ya na tankị mposi gị. Nsonaazụ? Obere ube ga-abata n’ime ụlọ oge ọ bụla ị ga-asa ụlọ mposi!
4. Ime soda iji hichaa ahịhịa mposi
Anyị na-echefukarị ya, mana ahịhịa mposi nwere ike ịnakọta ọtụtụ nje na ụmụ nje na-akpata isi ọjọọ n'ime ụlọ. N'echiche a, jide n'aka na ị na-ehicha ya mgbe niile site na ịhapụ ya ka ọ nọrọ na soda na-agwakọta ya na mmiri ọkụ. Richaa mgbe minit 30 gachara brọsh gị ga-adịkwa ọcha.
Cotton diski na lavender mmanụ dị mkpa - Isi: Nkọwa iri atọ na ise
5. Owu Cotton tinye ya na lavender
Si lavender bụ ezigbo onye enyemaka megide nchekasị, O nwekwara ike ịba ezigbo uru maka iwepụ ihe na-esi ísì ọjọọ na ime ụlọ ịwụ ahụ. Iji mee nke a, ị ga - achọ ịmịnye bọọlụ owu na obere tụlee mmanụ dị mkpa site na osisi a ma tinye ya n'ime akwụkwọ mpịachi mposi gị. N'ihi ya, a ga-esi ísì uto na ojiji ọ bụla!
6. A eke deodorant maka ụlọ
Iwepu nsị nsị, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịme deodorant gị. Aghụghọ? Gbanwee tablespoons abụọ nke soda soda, 10 tụlee nke mmanụ dị mkpa ị họọrọ na otu ngaji mmanya n'ime iko mmiri abụọ. Mgbe ahụ wụsa ihe niile n'ime karama na ịgba na ịgba ngwakọta mgbe isi ísì ọjọọ pụtara.
Akwa nhicha mmiri nwere ike inye ísì ọjọọ - Isi mmalite: Akwụkwọ ederede mba
7. Mmanya megide mmiri iru mmiri
Ọ bụrụ na anyị na-ejikọ ihe na-esi ísì ọjọọ na ọkpọkọ, enwere ihe ndị ọzọ nwere ike ịkọwa ọhụụ a. Otu n'ime ha bụ mmiri mmiri na akwa ịsa ahụ nke nwere ike iduga isi ísì ụtọ n'ime ụlọ. Iji dozie nke a, tinye akwa nhicha gị n'ime igwe ịsa ahụ wee wụsa na iko abụọ nke mmanya ọcha. Họrọ kacha ekpo ọkụ ugbu nke okirikiri gị ngwa oru na mgbe ozugbo dechara, ka ha nkụ na anyanwụ.
8. Mmanụ ndị dị mkpa maka isi nsi
Dị ka ihe na-esi ísì ụtọ nke ihe mkpofu nke nwere ike ịbata na kichin, ime ụlọ ịwụ ahụ nwere ike ịnwe isi na-adịghị mma nke na-esi na nsị. Ọ dabara nke ọma, ị nwere ike ịtụ anya nsogbu a site na ịwụsa ole na ole mmanụ dị mkpa n'ime ahịhịa tupu i jiri ya.
Onye na-edozi mmiri na WC tank - Isi mmalite: Diaries Country
9. Nri na akwa mposi
Dị ka amamihe dị na ịchọrọ, aghụghọ a na-enye gị ohere igbasa isi aghụghọ maka ụlọ ịsa ahụ nke na-esi isi mgbe niile. Iji mezuo nke a, ọ nweghị ihe ga-adị mfe: jidere ngwa ncha ọkacha mmasị gị ma ọ bụ nro dị nro ma wunye obere iko ya n’ime tankị mposi gị.
10. Ime soda maka akwa mmiri
Maka aghụghọ a, ị ga-ewetaahịhịa, otu quart nke mmiri luara andara na otu iko soda. Mgbe ị gwakọtara ihe abụọ a n'ime akpa, gbanye ahịhịa gị n'ime ya wee kpochapu ákwà mgbochi ịsa ahụ iji wepụ ebu na isi ísì ọjọọ.
Zere ịsa mkpofu ndị buru ibu - Isi mmalite: Akwụkwọ Ederede Mba
11. Obere ihe eji egbochie mkpo ahihia
Iji zere ịwụfu ya ọtụtụ ugboro, ụfọdụ ndị na-ahọrọ nnukwu ahịhịa nwere ike ịsa ahụ na ime ụlọ ịwụ ha. N'ụzọ dị mwute, nke a na - eme ka ohere nke isi na - esi isi na - ewute n'ihi mkpofu nke mkpofu. Zọ kachasị mfe bụ ịhọrọ mini-bin. Nke a ga - agba gị ume iwepu ọdịnaya ya oge niile, nke na-ebelata ohere nke isi nke ihe mkpofu na-agbasa n'ime ụlọ ahụ.
12. Lemọn na nnu maka taịl nile
Ihicha nkwonkwo taịl nile dị oké mkpa iji kpochapụ nje na unyi nwere ike ịbakọta ebe ahụ. Nke a aghụghọ na-achọ naanị nkeji ole na ole nke oge gị. Naanị gbanye ọkara lemon na nnu siri ike ma jiri mkpụrụ citrus na-ete nkwonkwo. Hapụ ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke awa wee sachaa mmiri dị ọcha maka ala dị ọcha ma na-esi ísì ụtọ. Enwekwara ike itinye aka na bat gị iji wepụ ihe nzu nzu na ntụpọ na-acha odo odo ma ọ bụ ọbụlagodi ime ka nhicha kichin gị dị mfe.
Nhicha mmiri mmiri na mposi mposi isi - Isi Iyi: Mba Diaries
13. Nhicha ngwaahịa ke ukot ụlọ mposi
Offọdụ n'ime unu maara nke ọma aghụghọ a. Na ezi ihe kpatara ya, ọ bụ ntọala nke ime ụlọ ịwụ na-esi isi mgbe niile. Gịnị ka ọ bụ? Wunye ihe ole na ole nke nhicha nhicha n'ime isi nke mposi mposi. Nke a ga - ahapụ ísìsì ọhụrụ na ịdị ọcha mgbe ojiji ọ bụla.
Isiokwu a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/13-astuces-simples-et-pratiques-pour-elimin-les-mauvaises-odeurs-de-la-salle-de-bain/
TELES RELAY 52646 posts 1 comments